> Resource> Android> Best Android App Ọhazi maka Ị
Android ama na table-ahapụ ị na-egwu ngwa ọdịnala na laa. Ọtụtụ ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba we bugota ụfọdụ nsogbu. Ka ihe atụ, were ya na ị ga-amasị iwepụ ọtụtụ achọghị ngwa, ị nwere iwepụ ha otu otu. Ọ bụ oge na-ewe, ọ bụghị ya? Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere a bara uru Android ngwa nhazi-enyere gị aka hazie ngwa? Ọ ga-abụ zuru okè.
Wondershare MobileGo for Android (Windows) bụ ọmarịcha ngwa nhazi Android. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, na-echigharịkwuru Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ma nsụgharị nke a usoro-enye gị ike iji hazie ngwa ọdịnala na gị gam akporo ngwaọrụ, gụnyere wụnye, iwepu na exporting ngwa.
Download a Android Ọhazi ngwa na kọmputa gị.
Cheta na: Ma nsụgharị nke a usoro ịrụ fọrọ nke nta ahụ. N'ihi ya, anyị ga-amasị na-Windows version - Wondershare MobileGo for Android dị ka ihe atụ.
Jikọọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa
Ná mmalite, wụnye na-agba ọsọ a Android ngwa nhazi na kọmputa gị. Agba ya mgbe ahụ. Jikọọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa site na iji eriri USB na ma ọ bụ site Wi-Fi (WiFi bụ nanị dị na Ohere version). Ozugbo ọ ahụrụ, gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ga-emere ke akpan window.
Cheta na: Lelee suported Android ntị na mbadamba ebe a.
Download ngwa ọdịnala si Online Resource
Nke a kasị mma Android ngwa nhazi na-ahapụ gị download ngwa mfe. Na n'elu aka ekpe kọlụm bụ Online Resource, site na nke ị nwere ike ibudata ngwa site Google Play, AppBrain, na ndị ọzọ weebụsaịtị kwukwara. Pịa cross ịgbakwunye weebụsaịtị na Online Resource. Na-agagharị na website na download ngwa. The ngwa ga-kpọmkwem ibudatara na arụnyere na gị na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Wụnye ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba
Ihe mbụ ị chọrọ ime mgbe nbudata ọtụtụ egwu ngwa ọdịnala bụ iji wụnye ha niile gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Na nke a Ọhazi Android ngwa, ị pụrụ ime ya mfe na effortlessly. Pịa "égwu" ke hapụrụ sidebar na-egosi niile ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ke ziri ezi. Pịa "Wụnye". Agagharị gị na kọmputa na-ahụ ngwa na ị chọrọ iji wụnye. Pịa "Open" iji wụnye ha.
Mbupụ gị Android ngwa
Nke a Android ngwa nhazi nwekwara ike gị mbupụ Android ngwa gị na kọmputa maka nkwado ndabere na mpaghara na-enweghị mgbalị. Họrọ ngwa na i bu n'obi na mbupụ. Pịa "Export" ma na-achọta ebe a na-azọpụta ndị ngwa.
Uninstall ngwa ọdịnala na gị gam akporo ngwaọrụ
Ọtụtụ na-abaghị uru ngwa weghara ukwuu ohere. Ọ bụrụ na ị gaghị na-eche iwepụ ha, a kasị mma Android Ọhazi ngwa abịa maka enyemaka gị. Mgbe ị na-ahọrọ na ngwa ọdịnala na ị chọrọ ịnọgide na ọzọ, pịa "Uninstall"> "Ee". N'ime sekọnd, ndị a ngwa ọdịnala ga-ewepụ. Ya mere ngwa ngwa!
Cheta na: Na Wondershare MobileGo for Android, na preinstalled ngwa ọdịnala na gbanyere mkpọrọgwụ Android ngwaọrụ nwekwara ike uninstalled.
Share Android ngwa site Facebook, Twitter na SMS
Ọ bụrụ na ị ibudatara na arụnyere ọtụtụ egwu ngwa, i nwere ike ịkọrọ ha n'etiti ndị enyi gị na ezinụlọ. Ego na ngwa ọdịnala ị ga-amasị ikere òkè. Na nri, pịa òkè bọtịnụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi 3 nhọrọ: "Share ka Facebook", "Share ka Twitter" na "Share site SMS". Họrọ ụzọ na-amasị gị ịkọrọ ndị ngwa.
Cheta na: Wondershare MobileGo for Android-ahapụ gị ịkọrọ ngwa ọdịnala na ị downlaod na ịwụnye. System ngwa ọdịnala na-agaghị ekwe ịkọrọ.
Olee otú Iji Jiri Allshare Nkedo Iji gbanye ihuenyo Mirroring On Samsung Galaxy